ကချင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်သည့် ကောင်းကျိုးပြုခြင်း၊ ဂုဏ်သိက္ခာခံယူရရှိရေးအတွက် ကျွန်တော်တို့၏ ခံယူချက်တင်ပြခြင်း ~ ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း ~ Myanmar Forward
နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာနယ်နိမိတ်အတည်ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြား သတ်မှတ်လာကြသည့်အခါ ပြည်ထောင် စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး နိုင်ငံသားများ ဖြစ်လာကြပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့သည် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်ကို ပိုင်းခြားသူများ၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများ၊ နယ်စည်းခြားသည့် လူသားခံတပ်များဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြည်ထောင် စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော်၏ နယ်စပ်များ ထိစပ်သောနိုင်ငံများနှင့် ခွဲခြားသည့်နယ်နိမိတ်မျဉ်းတစ်လျှောက် တိုင်းရင်း သားလူမျိုးစုများ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် အခိုင်အမာ နေထိုင်သည့် မြေခံရေခံ ထင်ရှားမှုကို ယနေ့ထက်တိုင် ထင်ရှားဆဲဖြစ်ပါသည်။
ဤအကြောင်းတရားများက ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအပေါင်းတို့၏ စုပေါင်းစည်းလုံးညီညွတ် သည့် လက္ခဏာကို သတ်မှတ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ခွဲခြားဆက် ဆံမှုမှ ပေါ်ပေါက်စေနိုင်သည့် ကျဉ်းမြောင်းသည့်လူမျိုးရေးဝါဒနှင့် လူမျိုးကြီးဝါဒသည် မိသားစု စိတ်ဓာတ်၊ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းမှရယူနိုင်သော အကျိုးကျေး ဇူးများစွာကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေလိမ့်မည်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း ဉာဏ်အမြော်အမြင်ကြီးမားသည့်အသိတရား လူမျိုးများ အားလုံး ခံယူစိုက်ထူကြရန် သတ်မှတ် ပေးထားပါသည်။
၂။ ကျွန်ုပ်တို့ ကချင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့သည်လည်း ဘာသာစကားတခုတည်း ရှိသူများမဟုတ်ကြပါဘူး။ နေထိုင် သည့်နယ်မြေတခုအတွင်း ကန့်သတ်မှုဖြင့် ကချင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ဖြစ်နေသူများ မဟုတ်ကြ ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံ၏မြောက်ပိုင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့တွင် ညီနောင်လူမျိုးများဖြစ်သည့် ဂျိန်းဖော့၊ ဇိုင်ဝါး၊ ရဝမ်၊ လော်ဝေါ်၊ လီဆူး၊ လာချိဒ်တို့ဖြင့် ဘာသာစကားကွဲအုပ်စုများဖြင့် ကချင်လူ မျိုးအိမ်ထောင် စုတခုအဖြစ် ကန့်ကွက်သူမရှိသည့် ကချင်များဖြစ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်သည့်အခြေခံဥပဒေပြဌာန်းသည့်အခါ ကချင်တိုင်းရင်း သား လူမျိုးအမည် နာမဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်အဖြစ် ဥပဒေပြဌာန်းသော်လည်း ရှမ်းတိုင်းရင်းသား လူမျိုးညီနောင်များ၊ ဗမာလူမျိုး ညီနောင်များ အစဉ်အလာမျိုးဆက်ပြန့်ပွား နေထိုင်လာခဲ့သည့် ရင်းနှီးချစ်ကြည်မှုကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ အချုပ် အခြာပိုင်ဆိုင်မှုအာဏာစက် တခုအတွင်းက လူမျိုးအားလုံးသည် တစ်ဦး၏သာလွန်ချက်ကို တစ်ဦးက အတုယူ၊ လေ့လာ၊ တစ်ဦး၏ တိုးတက် သည့် စွမ်းရည်ကို တစ်ဦးက လေ့လာခြင်းဖြင့် အတူတကွ အကျိုး တူပူးပေါင်းဆောင် ရွက်သည့် အကျိုးကျေးဇူးများ လူမျိုးအသီးသီးပါဝင်သည့် နိုင်ငံတော်ကြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက် ချမ်းသာ ကြွယ်ဝ သည့် ဂုဏ်သိက္ခာ ခံယူကြဘို့ ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့ စုပေါင်း သည့်အင် အားဖြင့် လုံခြုံစိတ်ချရစေရန် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ကို သတ်လျှိဖြိုခွဲပြီး အနိုင်ကျင့်သည့် ရန်သူအဖျက်သမားများကို ဆန့်ကျင်ဖြို ခွင်းနိုင် သည့် စည်း လုံးမှုအင်အား ဖော်ထုတ်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ် တို့သည် အင်အားကြီးအဖြစ်တည်ဆောက်ရန် အပြုသဘောဆောင်သည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် စည်းလုံး ညီညွတ်မှုကို ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်သည့် နိုင်ငံရေး အတွေး အခေါ်နှင့် တစုတစည်းတည်းသော အမျိုးသားရေး ဝါဒ တည်ဆောက်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ခြင်း၏ ဆိုးကျိုးသည် တိုင်းတပါးနယ်ချဲ့က ကိုလိုနီ ဝါဒကျွန်ပြုခံခဲ့ရသည်ကို သတိမရ၊ သင်ခန်းစာမယူ တတ်ကြသဖြင့် လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲအောင် နိုင်ခဲ့သော် လည်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုပျက်ပြားပြီး အချင်းချင်း ရန်ပြုနေခဲ့ကြခြင်းက ခေတ်နောက် ကျကျန်နေ ရ သည့် ဘဝကနေ ရုန်းမထွက်နိုင် ကြပါဘူး။ ခွဲခြား ရန်ပြုသည့် မှားယွင်းသောဆက်ဆံမှုက ပိုမိုခေတ်နောက်ကျ သွားစေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ သားကောင်း၊ သမီးကောင်း လူငယ်လူရွယ်များကို ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် သည့် အတတ် ပညာရှင်များ၊ သိပ္ပံပညာရှင်များ၊ နည်းပညာရှင်များ၊ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝသည့် စက်ရုံ အလုပ်ရုံ ပိုင်ရှင်များ၊ တီထွင်ဖန်တီးသည့် ပညာရှင်ကြီးများ မွေးထုတ် ရမည့်အစား ပညာမဲ့များ၊ ဆင်းရဲနွမ်း ပါးသူများ၊ သေကျေပျက်စီးခံရသူများအဖြစ် အတင်းအကြပ် ဘဝပျက်စေခဲ့သည်။ အကျင့်စရိုက်ဆိုးများ ဖန်တီးပေးသည့် မတည်မငြိမ်မှုနှင့် တရားမရှိ စည်းမဲ့ ကမ်းမဲ့ လူသတ်သမားများ၊ အဖျက်သမားများဘဝ ရောက်သွား ရသည်။ တဇွတ်ထိုးဆင် ကန်းတောတိုးဝါဒများ လွှမ်းမိုးပြီး မိတ်ဆွေကို ရန်သူလုပ်သည်။ အကျိုးယုတ် သထက် ယုတ်စေခဲ့သည်။ အဆိုးဆုံးကိုမှ အဆက်မပြတ်ရွေးလုပ်သည်။ မိမိကိုယ်ကို အသိဆုံး၊ အတော် ဆုံးဆိုပြီး အကြံကောင်းများကို ပစ်ပယ်သည်၊ ပြည်သူလူထုများအား ဆင်းရဲဒုက္ခစုံ ဖန်းတီးပေး သည်။ အကောင်းတစိမှမရှိသည့်လုပ်ငန်းဖြင့် လူမျိုးနှင့်တိုင်းပြည်ကို ဒုက္ခပေးကြပြီ မဟုတ်ပါလော..?
၃။ KIO/KIA ခေါင်းဆောင်များခင်ဗျား..? KIO/KIA စတင်ထူထောင်သည့် ဒူဝါလဖိုင်နော်ဆိုင်း၊ လထော်ဇော် ဆိုင်း၊ လထော်ဇော်ထူး၊ လထော်ဇော်ဒန်တို့ကို ဆက်ခံ လာခဲ့သည့် ဆရာကြီးမရန်ဘရန်ဆိုင်း၊ ဦးမလိဇွပ်ဇော် မိုင်၊ ဦးလမာလရိန်၊ ဦးလမုံတူးဂျိုင်၊ ဦးအင်ဘန်လ၊ ယခုဦးလညော်ဇောင်းခါ၊ ဦးဂွန်ထန် ဂမ်ရှောင်၊ ဦးဆွမ်လွတ်ဂွမ်မော်တို့အနေဖြင့် လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားရွေး ချယ်ကြရမည့် အချိန်ရောက်နေ ပါပြီး။
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကို အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်အားကိုးရန်မှတပါး အခြားမရှိပါ၊ လက်နက် ကိုင် ပဋိပက္ခကိုရပ်ဆိုင်းပြီး တပ်မတော်ကိုတိုက်ခိုက်မှုမှန်သမျှ လုံးဝ ရပ်ဆိုင်းခြင်းထက် ကောင်းစရာ အခြားမ ရှိပါ။ လမ်းဖျက်၊ တံတားဖျက်၊ ရထားလမ်းဖောက်ခွဲ ဖျက်ဆီးခြင်းများ လုံးဝရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့် မိုင်းဗုံးထောင် ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးမှုဖြင့် ပြည်သူနှင့် နိုင်ငံတော်ကို ရည်ရွယ်ဦးတည်ဖျက်ဆီးနေသည့် လုပ်ရပ် အားလုံး လုံးဝရပ်ခြင်းသည် KIO/KIA အဖွဲ့အတွက် အကောင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ KIO/KIA ခေါင်းဆောင် တို့အတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်။ နောက်လိုက်နောက်ပါအားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ကချင်လူ မျိုးများ နှင့် ညီနောင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံး ကောင်းကျိုး ပြုမှုကြီးဖြစ် ပါသည်။
အပစ်ရပ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးရယူခြင်း၊ အမျိုးသားအခွင့်အရေးအတွက် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ရခြင်း၊ မျက်မှောက် ကမ္ဘာ ပင်မရေစီးကြောင်းဖြစ်သည့် ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအား လေးစား လိုက်နာ ဖော်ဆောင်ခြင်းတို့ကို စိတ်ရောကိုယ်ပါ ရိုးသားဖြူစင်သည့်နှလုံးသားများဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း ထက် အခြားကောင်းကျိုးဖြစ်စရာ မရှိပါ။ KIO/KIA ခေါင်းဆောင်တို့အပေါ် ကချင်လူမျိုး များ၏ မျှော်လင့်မှု၊ လူမျိုးအားလုံး ပြည်သူတို့ ၏မျှော်လင့်မှု၊ ဘာသာပေါင်းစုံ ယုံကြည် ကိုးကွယ် သည့်လူထုများ၏ မျှော်လင့်မှု၊ အစိုးရ၏ မျှော်လင့်မှု၊ တပ်မတော်၏မျှော်လင့်မှုများဖြစ်ပါသည်။ ဤလိုအင် ဆန္ဒများကို ဖြည့်ဆည်း ပေးသည့် ခေါင်းဆောင်ကြီးများအဖြစ် ခံယူခြင်းဖြင့် မြင့်မြတ်သော ဂုဏ်သိက္ခာ ခံယူနိုင်သည့် အခွင့်အရေး လူကြီးမင်းတို့အတွက် ဖြစ်နေပါသည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ကနဦးအလိုအပ်ဆုံး ဖြစ်နေ ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအမြန်လုပ်ပါလို့ တောင်းဆိုတိုက်တွန်း ပါသည်။ မနည်းလှ သည့် ကချင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေ အထင်အကြီးဆုံးခံရသည့် အမေရိကန် အစိုးရကလည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြေရှင်းကြရန် တိုက်တွန်းနေပါသည်။
KIO/KIA ခေါင်းဆောင်များအတွင်းမှလည်း လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်နှင့် အဖျက် အမှောက် လုပ်ရပ်များ စွန့်လွှတ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ကာ ကချင်တိုင်းရင်းသားများ ကြုံတွေ့နေရသည့် ဒုက္ခများဖြေရှင်းရေး ဆန္ဒပြင်းပြ သူတွေ အများကြီး ရှိနေပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရေးကို ဆန္ဒထုတ်ဖော် ခိုင်းကြည့်ကြ ပါလား၊ အဖြေမှန် ခင်ဗျားတို့ရမှာပါ။
သို့ပါ၍ KIO/KIA ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် အမျိုးသားရေးအတွက် ကောင်းမှုပြု သည့် လူပုဂ္ဂိုလ် များဖြစ်နိုင် သည့် အခွင့်အရေးရရှိမည့် အခွင့်အရေးကြုံနေပါသည်။ နိုင်ငံတော်မှာ အဆင့် အမြင့် ဆုံးဖြစ်သည့် အရေးက်ိစ္စမှန်သမျှကို နိုင်ငံရေးက ဆုံးဖြတ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံရေးသမားများ၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများက နိုင်ငံရေး ဖြေရှင်းမှုဖြင့် အကောင်းဆုံးနိုင်ငံရေးစနစ်၊ အကောင်းဆုံး အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်၊ အကောင်းဆုံး ဥပဒေပြဌာန်းချက် များ ရရှိကြပါသည်။ KIO/KIA ခေါင်းဆောင် များအနေဖြင့် နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြရပါ တော့မည်။
အကောင်းဆုံးနိုင်ငံရေးစနစ်ကို ပြဌာန်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရပါတော့မည်။ KIO/KIA ခေါင်းဆောင် များခင်ဗျား.. လူကြီးမင်းတို့က ငြိမ်းချမ်းရေး လိုချင်ရင် မျက်စိတမှိတ်မှာ ငြိမ်းချမ်း သွားမည်၊ ဂျိုးဖြူငှက် တစ်ကောင် က သံလွင်စက်ကို ချီသည့် ကမ္ဘာ့ကုသလသမဂ္ဂ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး တမန်တော်ရောက်ရှိပါမည်။ မရေမတွက် နိုင်သည့် ကြုံတွေ့ နေရသည့် ကချင်တိုင်းရင်းသား မိဘများ၊ ကလေးများကို ကူညီကယ် တင်ရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရ ရောက်လာမည်။ နိုင်ငံတော် အစိုးရမှာ တာဝန်ရှိသည်။ တာဝန်ယူနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံတော် အစိုးရက နိုင်ငံခြားအစိုးရများ၊ အဖွဲ့အစည်းများကို အကူအညီပေးရန် တောင်းဆိုလာပါက နေ့ချင်းညချင်း ဒုက္ခသည်များဘဝကို အသစ်တဖန် ပြောင်းလဲမြှင့်တင်ပေးကြမည်။ လူကြီးမင်းတို့ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုကြမည်။
၄။ လူကြီးမင်းများခင်ဗျား. ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရာတွင် ကြားလူကြီးတွေ၊ ကြားအင်အားစုတွေ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ပွဲစွားတွေ လိုအပ်သည့်အခြေအနေ အမှန်တကယ်ရှိပါက အမြန်ဆုံးရွေး ချယ်တာဝန်ပေး နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ကန့်ကွက်ရန်မရှိပါ။ ဆွေးနွေးမည့် နေရာမှာ ကချင်အရေးဆွေးနွေးမည်ဆိုရင် ကချင်တိုင်းရင်း သားလူမျိုး ရှေ့မှီနောက်မှီ လူကြီးများ၊ တက်သစ်စလူငယ်များ ပါဝင်အကြံပြုနိုင်ရမည် မဟုတ်ပါလား။ ကချင်လူမျိုးနှင့်အတူတကွ နေထိုင်လာခဲ့သည့် ရှမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုး ကြီးများနှင့် အကြံကောင်း ဉာဏ်ကောင်းများ ပေးနိုင် သည့်နေရာကို ရွေးချယ်သတ်မှတ်သင့်ပါသည်။ ဘာသာရေး အသင်းအဖွဲ့များထံမှ အကြံကောင်း များလည်း ရယူသင့်ပါသည်။ ကချင်ပြည်နယ်၏မြို့တော် မြစ်ကြီးနား သည် အသင့်တော် ဆုံးနေရာဘဲဖြစ်ပါသည်။ ပြင်ပတနေရာရာမှာ ဆွေးနွေးရေး၊ တတိယနိုင်ငံမှာ ဆွေးနွေးရေး ကို ကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးလက္ခဏာအပြည့်အဝ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အနှစ်(၅၀)ကျော် စုပုံထားသည့် အမှိုက်ပုံကြီးကို အနီးအနားမှာဘဲ မီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီး ပြေငြိမ်း စေကြရပါမည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးကိစ္စကို KIO/KIA က မခိုင်မာနိုင်သည့် UNFC ကိုလွှဲလိုက်၊ ပြင်ပတနေရာရာမှာ ဆွေးနွေး မည်ဆိုပြီး လွှဲလိုက်၊ တိုင်းရင်းသားညီနောင်(ဝ) အဖွဲ့၏ ဌာနချုပ် ပန်ဆန်းမှာဆွေးနွေးမည်ဆိုပြီး မရေမရာပြု လုပ်နေခြင်းသည် ငြိမ်းချမ်းရေး အမြန်ဆုံးရရှိရန် လိုလားနေသည့် ကချင်တိုင်း ရင်းသားလူ မျိုးတို့ကို ပြက်ရယ်ပြုစော်ကားရာ ရောက်နေပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့၏ လက်အောက်ငယ်သားများကို စော်ကားရာရောက် လွန်း နေပါသည်။
၅။ KIO/KIA ခေါင်းဆောင်လူကြီးမင်းတို့ခင်ဗျာ.. ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ ၁၇ နှစ်တိုင်တိုင် ငြိမ်းချမ်းရေး ကို ကာလတစ်ခုအတွင်း နိုင်ငံရေး မဖြေရှင်းခြင်းကြောင့် စစ်မက်ထပ် မံဖြစ်ပွားလာ ရပါသည်ဆိုသည့် အကြောင်းပြချက် မမှန်ကန်ပါဘူး။ ၁၇ နှစ် ကာလ သည် လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ ယာယီရပ် ထားခဲ့ကြတာဘဲ ရှိပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက် ခြင်း အလျဉ်းမရှိခဲ့ကြပါဘူး။ ၁၉၉၄ ခုနှစ် အပစ်ရပ်ရေးမှတဆင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင် ရန် တပ်မတော်အစိုးရသည် KIA အတွက် တပ်တည်နေ ရာများစွာ သဘောတူခွင့်ပြုခဲ့သည်။ တောပုန်း အခြေအနေမှ ထင်ထင်ရှားရှား လွတ်လွတ် လပ်လပ် လှုပ်ရှားအခြေပြုနိုင်သည့် အခွင့်အရေးများ ရခဲ့ပါသည်။ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ်စည်းရုံးလှုပ်ရှားပြီး ကျောက်စိမ်းမှော် များ၊ ရွှေမှော်များ၊ သစ်တောများ လက်ဝါးကြီးအုပ်၊ ရောင်းစား ကိုယ်ကျိုးရှာ နိုင်ခဲ့ကြ သည်။ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များအတွက် အရင်းအနှီးများ စုဆောင်းနိုင်ခဲ့သည်။ လူအား၊ ရုပ်ဝတ်ထု အင်အားတွေ ကို စုဆောင်းနိုင်ခဲ့သည်။ လက်နက်ကျည်ဆံများ ၁၀ နှစ်တိုင် ထုတ်လုပ်စုဆောင်း တပ်ဆင်နိုင် ခဲ့သည်။ ကချင်လူမျိုး အချင်းချင်းအကြား သပ်လျှိသွေးခွဲမှုတွေ မရပ်မနား လုပ်ဆောင်နေ ခဲ့ကြသည်။ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ် ရေးတွေ ဖန်တီးလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
အတုအယောင် ကချင်အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ဆိုတာကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဦးဆောင်သယောင်၊ ပါဝင်သယောင်၊ ထောက်ခံ သယောင်ပြုလုပ်ပြီး အကြံကောက်၊ အကြံယုတ်တွေ ရုပ်လုံးမပေါ် စေရန် ဖုံးဖိမှုပိပိရိ ရိလုပ်ခဲ့ကြ သည်။
နောက်ဆုံး ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်ကြတော့ မလိုလိုလုပ်ပြီး KIO ဗဟို အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာမနှစ်တူးဂျာကို ဖယ်ထုတ်မှုကြီးတစ်ခု အဖြစ် အလိမ် အညာပေါင်းများစွာဖြင့် အကြံကောက်၊ အကြံယုတ်များကို ဖုံးကွယ်လှုပ်ရှားခဲ့ ပါသည် မဟုတ်ပါလော။
KIO/KIA မှခွဲထွက်ခဲ့သည့် NDAK အဖွဲ့၊ KDA အဖွဲ့တွေနှင့် ပြန်လည် သင့်မြတ်ပြီး ပူးပေါင်းရေးကို နှစ်အချို့ အလုပ် မရှိအလုပ်ရှာရှုပ်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးသစ္စာဖောက်များနှင့် ပြန်လည် ပေါင်းထုပ်ခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုသည့် KIO/KIA ၏ ရပ်တည်ချက်ကတော့ ကောင်းမြတ်ပါသည်။ NDAK နှင့် KDA အဖွဲ့သည် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်သည့်အင်အားစုများ အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
KIO/KIA အဖွဲ့၏ ထောက်လှမ်းရေးမှူးချုပ် ဦးလဆန်အောင်ဝါနှင့် KIO အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးဝမ် ယံအား ဖမ်းဆီးအသေသတ်ရန် ကြံစည်သော်လည်း ၎င်းတို့ ကံကောင်း ထောက်မသဖြင့် ယခုထက် တိုင် အသက်ထင်ရှား ရှင်သန်နေနိုင်ကြပါသည်။
ဦးအင်ဘန်လအုပ်စုသည် ဦးဇော်မိုင် ခေါင်းဆောင်မှုကို ဖြုတ်ချပြီး အာဏာ သိမ်းယူခဲ့ကြသည်။ KIO/KIA ကို အမျိုးသားရေးဆောင်ရွက်မှုများအဖြစ်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတစ်ရပ်အဖြစ်လည်းကောင်း ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းကြတော့မည့်ပုံ ဟန်ဆောင်ကောင်းခဲ့ ကြသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးကင်စင်ရေးဆောင်ရွက်ပြီး ဘဝပျက်နေသည့် လူငယ်/လူရွယ်များကို ကယ်တင်ကြတော့မည့် လူကြီးလူကောင်းများအဖြစ်လည်း ဟန်ဆောင်ကောင်းခဲ့ကြသည်။ ဟန်ဆောင်ကောင်းမှုဖြင့် ဖုံးကွယ်ထားကာ မူးယစ်ဆေးဝါးအမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ရောင်းချပြီး လူသားများဘဝကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါသည်။
အင်ဘန်လအုပ်စု၏အာဏာကို အန်တုရန်ကြံစည်နေသည်ဆိုပြီး ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် ဖြစ်သည့် ဦးလဇိန်တောက် ဝါကို ဗုံးခွဲလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့သည့်တရားခံကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။ ၁၇ နှစ်တောင်ကြာ သည့် အပစ်ရပ်မှုကို ဘာဖြစ်လို့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ဆက်လက် ဖော်ဆောင်ရန် ပျက်ကွက် ခဲ့ကြပါသလဲ..?
KIO/KIA ခေါင်းဆောင်များ အဆက်ဆက်သည် ပြည်ထောင်စုအရေးအတွက် ကောင်းမှုပြုရန်၊ ကချင်တိုင်း ရင်းသားတို့ အတွက် ကောင်းမှုပြုရန်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင် နိုင်ရေးအတွက် ကောင်းကျိုးပြုရန် ဆန္ဒမရှိ ခဲ့ကြပါဘူး။ ကချင်လူမျိုးကို အလွဲသုံးစားပြုထားသည့် အလံတလက်အောက်မှာ လူသတ်၊ မီးရှို့၊ သွေးခွဲ သမားများ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ထိပ်ပိုင်း တာဝန်ရယူသူတို့သည် ကိုယ်ကျိုးစီးပွား လောဘ များပြည့်လျှံနေ ခဲ့ကြသည်။ အာဃာတ ကြီးသူ များဖြစ်လာသည်။ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် တာဝန်ယူသည်နှင့် အလုံးစုံ ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက် သူများ ဖြစ်သွားကြပြီး မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၏ အကြံပြုချက်ကိုမျှ လက်မခံကြတော့ပါဘူး။
ရိုးသား ဖြူစင်သည့်နှလုံးသား လုံးဝမရှိကြတော့ပါဘူး။ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ အဆက်မပြတ် ကျူးလွန်ပြီး နိုင်ငံတော်နှင့် လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားကို ဖျက်ဆီးပြီး အသက် အန္တရာယ်ပေးသူများ၏ ပုံသဏ္ဍာန်ရုပ်လုံး အပြည့်ရှိကြသူများဖြစ်သည်။ အကျင့်ပျက်၊ အကောက်ကြံရာတွင် ညံ့ဖျင်းသူများ လုံးဝမဟုတ်ခဲ့ကြသူများဖြစ်ကြပါသည်။
၆။ KIO/KIA ခေါင်းဆောင်လူကြီးမင်းတို့သည် လက်နက်အားကို တိုက်ခိုက် အနိုင်ကျင့်မှုဖြင့် ဘာမှရနိုင် လိမ့်မည်မ ဟုတ်ပါဘူး။ တပ်မတော်သည် လွတ်လပ်ရေးရကာစမှာ ပေါ်ပေါက်သည့် ကရင်ပုန်ကန်မှုကို တိုက်ခဲ့ သည်။ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသည့် တရုတ်ဖြူ KMT နှင့်လည်း တိုက်ခိုက်အနိုင်ယူခဲ့ကြပြီး ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီဦးဆောင်သည့် လက်နက် ကိုင်အင်အားစုကြီးနှင့်လည်း တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီး အခြားတိုင်း ရင်းသားလူမျိုးအချို့ အတွင်းက လက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်လည်း တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြလေပြီး တပ်မတော် ကြီးကို တိုက်ခိုက် အောင်နိုင်ခြင်း လုံးဝမရှိပါဘူး၊ လုံးဝမရှိနိုင်ပါဘူး။
ကျွန်တော် တို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့အနေဖြင့် အမျိုးသားရေး၊ တန်းတူရေး၊ လွတ်မြောက် ရေးကြွေး ကြော်ပြီး လက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုပြုသမျှသည် မိမိတိုင်းရင်းသားလူမျိုး တို့ကို ထိခိုက်သေကျေဆုံးရှုံးရာသို့ ရောက်ကြ ရသည့် အန္တရာယ်ဖန်တီးခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ တပ်မတော်မှာပါဝင်ပြီး နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ် သည့် တပ်မတော်သားကောင်းများအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ကြမယ်ဆိုရင် ဂုဏ်သိက္ခာ ရရှိကြမည်ဖြစ် ပါသည်။
ကမ္ဘာကြီး၏ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတစ်နေရာမှာ ဗာမြူဒါတြိဂံကြီးအတွင်း ပျောက်ချင်းမလှ ပျောက်သွား သည့်နေ ရာ သို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကိုခေါ်မသွားကြပါနှင့်၊ တောင်းပန်ပါသည်။
KIO/KIAက ကျွန်တော်တို့ ကချင်အထူးဒေသ(၁)၏ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို လက်နက်ကိုင်တပ်စေလွှတ်ပြီး တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးနေခဲ့ခြင်းအား အမြန်ရုပ်သိမ်းရန် ကျွန်တော်တို့ အဆက်မပြတ် တောင်းဆိုပါသည်။
ဖရဲရွာသား များကို ပြန်ပေးချောတပ်ဆွဲပြီး၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏မြေပေါ်တွင် ဒုက္ခသည်များ အဖြစ် ဆင်းရဲဒုက္ခ ခံစားစေနေခြင်း အား အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးရန် အဆက်မပြတ်တောင်းဆိုပါသည်။ တံတားဖျက်၊ လမ်းပန်း ဆက် သွယ်ရေး ဖျက်ဆီးပြီး၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုကို မဖွံ့ဖြိုး မတိုးတက်နိုင်ရန် တားဆီးနှောင့် ယှက်နေခြင်း အား ရပ်ဆိုင်းရန် အဆက်မပြတ် တောင်းဆို ပါသည်။
ကချင်တိုင်းရင်းသား လူငယ်/လူရွယ်တို့သည် ပညာတတ်များ၊ ပညာရှင်များ၊ လုပ်ငန်းရှင်များအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိကြရန် လိုအပ်လှပါသည်။ သို့မှသာလျှင် ကချင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတို့ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် လူနေမှုစနစ် တည်ဆောက်နိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
KIO/KIA လက်နက်ကိုင် ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုသာ မပေါ်ပေါက်ခဲ့ရင်၊ လက်နက်ကိုင် ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုကို အမြန်စောလျင်စွာ စွန့်လွှတ်ကြမည်ဆိုရင် ကချင်လူမျိုးတို့၏ မွေးရပ်ဇာတိ မြေမှာ တိုင်းရင်းသားတို့၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရှိန်အဟုန်နှင့် တည်ဆောက်အောင်မြင်နိုင်မည် မဟုတ်ပါလား။
တရုတ်- မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ၏နယ်စပ်ဒေသမှာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ဖော်ဆောင် တည်ဆောက်ရေး တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရနှင့်စိတ်ကောင်းစေတနာရှိသည့် အကူအညီနှင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးကိုလည်း KIO/KIA အဖွဲ့က တားဆီးနှောင့်ယှက် နေခြင်း မဟုတ်ပါလား။
လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ် သက်ဆိုးရှည်ချင်သဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာ ခိုကပ်ပြီး အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာ ဆိုးကျိုး(မိမိတို့ကိုယ်တိုင်က မိမိတို့ကိုယ်ကို ကျဆုံးစေ သည့် လူကြီးမင်းတို့၏ နည်းပညာမဟာဗျူဟာ၏ အကျိုးယုတ်ရသည့် လုပ်ငန်းစဉ် ရေရှည်ခံ နိုင်ပါ့မလား။) ခံစားနိုင်ကြမလား..?
၇။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာ ဖြစ်ပွားနေသည့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ သည် တိုင်းရင်း သားလူ မျိုးပြည်သူတို့၏ အကျိုးနှင့်ပတ်သက်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူး၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပြည် သူလူထု တရပ်လုံး ၏ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး များ ကို နိုင်ငံတော်၏ ဒီမိုကရေ စီစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကသာလျှင် ရရှိစေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
တရားမျှတသော အခွင့်အရေး ပြဌာန်းနိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အဟန့်အတား ပြုနေသူများသည် လက်နက် ကိုင်လမ်းစဉ်ကို စွဲကိုင်ထားကြသေးသည့် ခေါင်းဆောင်များဖြစ်နေ ပါသဖြင့် ခေါင်းဆောင်နေ သည့် လူကြီးမင်းတို့ ပြောင်းလဲကြပါရန် မျှော်လင့်ယုံကြည်စွာ ဆန္ဒပြု တိုက်တွန်းပါသည်။
တပ်မတော် နှင့်ယှဉ်ပြိုင် တိုက်ခိုက်ရန် မကြံစည်သင့်ကြတော့ပါ။ တိုက်ခိုက်မည့် အကြံအစည်မှန်သမျှသည် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့် သားကောင်း၊ သမီးကောင်းများ၏ အသက် သွေးများပျောက်ဆုံးစေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းကျိုးအဖြာဖြာနှင့် မိမိ၏ ပင်ကိုယ် လူမျိုးများ အတွက် ကောင်းမှုပြုနိုင်ကြပါစေ…..
မိတ္တူ - ၊ ရုံးလက်ခံ။